Ukubuyiselwa kweSemalt: IiNkonzo eziNcedo zoBuchule beeWebhanki ezingezizo iiCode
Ukuba ngumntu ongeyomsebenzi, unokuza kunye nemithintelo xa ukhetha inzuzo ukukhwa kwewebhu inkonzo. Kuyinyani ukuba kukho ininzi yeenkqubo kwi-intanethi. Abanye babo bakhupha idatha esuka kwidilesi ye-imeyile ngelixa ezinye zijolise ekuphumeni kweendaba, iindawo zokuhamba kunye namajelo eendaba ezentlalo. Ezi nkqubo zedatha yokulandelwa kweedatha zijoliswe ngokukodwa kwii-code kunye nabantu abafuna ukuhlala kude neelwimi zokufunda ezifana neC ++ xa befezekisa imisebenzi yabo.
Ngenye yezona zinto zintle kwaye zinenzuzo kakhulu kwiinkonzo ze-web zokukhahlaza ngaphandle kweekhowudi. Ubungcali beSpinn3r kukuba buyakwazi ukukrazula iwebhusayithi yakho yonke kunye nokutshintshela idatha kwiiblogi zangasese, imidiya yoluntu kunye nezibonelelo ze-RSS. Isebenzisa i-Firehose API kwaye ilawula ngaphezulu kwe-80 ekhulwini ye-indexing kunye ne-Internet. Ukongeza, i-Spinn3r igcina ulwazi olukhishwe kwifomu ye-JSON kwaye inempahla efana ne-Google. Ihlola kwaye ihlaziywe iifasethi zakho ngokweemfuneko zakho kwaye yenza uphando kwi data eluhlaza, ukufumana ulwazi oluphezulu kunye nolwazi oluhle kakuhle.
I-Octoparse yenye yezo nkonzo zokucoca iinkcukacha ezilula ukuzimisela. Kuyaziwa ngokubanzi ngomsebenzisi walo onobungane kwaye obalaseleyo. I-octoparse yenza kube lula kuwe ukuba ulandele idatha ukusuka kumaphepha anzima ewebhu kwaye ulingise umsebenzisi wabantu ngelixa uchonga ulwazi kunye nokujolisa kwiindawo ezahlukeneyo kunye neeblogi. I-Octoparse ikuvumela ukuba ulondoloze idatha ekhishiwe kwifu okanye uyikhuphele kumshini wendawo.
I-Fminer yenye yezona nkcukacha zoncedo zokunikwa kwedatha. Idibanisa iinkcazo zeklasi zehlabathi kwaye ikuvumela ukuba uzibonise idatha yakho ngelixa ikhutshwe. Ukufumana ulwazi olusuka kwiindawo ezilula kwaye eziyinkimbinkimbi kwaye akufuneki ukuba nezakhono zenkqubo. Ukuba unakho ulwazi lobuchwephesha, i-Fminer yinkqubo efanelekileyo kuwe.
5. I-Hub ye-Outwit
Yandisa isandiso se-Firefox ongayilondoloza kwaye uyisebenzise njenge-add-ons rhoqo ye-Firefox.I-Hub ye-Outwit yenye yezona zinto zilungileyo kunye nezimangalisayo zedatha yokutshintsha idatha. Akugcini nje ukuqokelela kunye nokwahlula idatha kodwa iphinda ihlasele amaphepha ewebhu ahlukeneyo, okwenza kube lula kuwe ukukhuthaza uphawu lwakho. Ukuba ungaphandle kwebhokisi, le nkqubo ayifuni naziphi na izakhono zenkqubo kwaye kulula ukuyisebenzisa.
6. I-Web Scraper - I-Chrome Extension